ISTICMAALKA HOL SIDA BACRIMINTA - NAFAQADA DHIRTA
Dhamaan xoolo-dhaqatada, labadaba khibrad iyo jibbaar, waxay yaqaanaan ku saabsan HOL (carbamide). Tani waa bacriminta iyo bacriminta waxtarka leh ee beerta. Maanta waxaan u sheegi doonaa: waa maxay HOL, oo ​​ku saabsan xeerarka isticmaalka sida bacriminta, iyo sida loo maareeyo cayayaanka beerta leh ee Hure.
Waa maxay HOL
Urea (Hale) - bacriminta nitrogen ee granules, kaas oo si ballaaran loo isticmaalo beerista iyo beeraha, marka lagu daro, waa jaban oo la awoodi karo.
Haddii aad isticmaasho qiyaasta saxda ah ee HOL sida bacriminta dalag gaar ah, dhirta si fiican ayey u korayaan, u koraan, oo soo saartaa badan oo miro.
Urea ee qaabkeeda saafi ah - hareeraha wareega cad ama cad, iyo xaqiiqda ah in la soo saaro warshadaha, ma ogola inay xirto inta lagu jiro gaadiidka iyo kaydinta. (NH2)2CO waa foomka kiimikada ee Hure, taas oo ku dhowaad kala bar, oo ah 46% wadarta guud, waa nitrogen.
Ma taqaanaa? E927b - Cuntada cuntada waa HOL, oo ​​loo isticmaalo soo saarida xanjo.
Urea waxaa lagu kala diraa xalado badan oo caan ah, oo ay ku jiraan biyo caadi ah, taas oo suurtogal u ah in ay u isticmaasho labadaba qaabka saafiga ah (granules) iyo qaabka xalalka aqueous ee diiradda la rabay.
Waa muhiim! Urea waa in si taxaddar leh looga ilaaliyaa qoyaanka inta lagu jiro kaydinta, maadaama ay aad u qoyan tahay.
Calaamadaha la'aanta nitrogen ee dhirta
In ciidda furan-hawada, geedo waxaa saameeyey by isirrada kala duwan, xitaa haddii ay ahayd mid xooggan at marxaladda seedling. Marka aysan jirin nitrogen ku filan carrada, waxaad hubaal ahaan u arki doontaa tan oo dhirta, sida waafaqsan sifooyinka qaarkood:
Koritaanka dhirta oo aad u gaabiya
Caleemaha daciifka ah, dhuuban iyo gaaban ee dhirta iyo geedahooda.
Caleemaha on dhirta waa yar yar oo cidhiidhi ah, cagaaran iftiin (cirro leh) midabka, ama xitaa leh yellowness muuqaalka. Wixii dhirta oo aan lahayn nitrogen, caleemaha ayaa dhici karta goor hore.
The ubaxyada ubax yihiin horumarin oo daciif ah, waxay ka yar yihiin ay ka yar tahay in ay ahaayeen, siday u kala horreeyaan, geedka farsamo u liita.
Waa muhiim! Xaddiga nitrogen ee dhirta sidoo kale waa mid aad u dhib badan, waxaa markaa loo beddeli karaa Nitrates, iyo xad-dhaaf ah Bacriminta nitrogen ee carrada keenaya koritaanka degdeg ah ee dhirta leh formation of cagaar badan, laakiin fructification ku xanuunsan.
Isticmaalka HOL sida bacriminta
Urea waxay ku habboon tahay dhammaan shuruudaha iyo qaababka codsiyada (inta lagu guda jiro beereed, ka hor beerashada, inta lagu jiro xilliga sii kordhaya ee dhirta, quudinta foliar ka hor inta aan ugxan-miro ah).
Urea waxaa loo isticmaalaa bacriminta ugu muhiimsan ka hor inta aan lagu beerin dhammaan noocyada carrada iyo quudinta qudaarta, ornamada iyo miraha miraha. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa xaaladaha dhulka la ilaaliyo.
Xaqiiqo xiiso leh! Naadiga kubadda cagta ee Amkar ee ka soo jeeda Perm waa soo gaabinta laba kiimiko, ammonia iyo carbamide.
Badanaa, daaweynta asaasiga ah ee dhirta leh HOL waxay tusinaysaa in lagu soo bandhigay dhulka si aad u sarreeya, iyada oo lagu sii gelinayo meelo kala duwan.
Si fudud u kala-saar daaraha carbamide inta lagu jiro roobka ma fiicnaayo.Sidaa darteed, waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo codsiga maxaliga ah - xalka aaladda hore ee loogu talagalay geedo beerta leh biyo waraab ah ayaa lagu shubi karaa sida ugu dhow ee suurtogalka ah ee xididada.
Wixii strawberries, qajaarka, yaanyada, kaabajka, xalka wuxuu ka kooban yahay 20-30 g oo ah HOL halkii 10 litir oo biyo ah, for gooseberries -10 g of HOL halkii 10 litir oo biyo ah, iyo currants -20 g of HOL halkii 10 litir oo biyo ah.
Habka labaad ayaa sidoo kale loo isticmaalaa - godadka godka ama godadka yaryar ee la yiraahdo granules waa la tuuraa, ku shubay iyaga oo ku dul shubay biyo. Xulashada ugu horeysa way ka fiican tahay in ay isticmaasho cimilada qallalan, iyo tan labaad - roobab. Dhirta miraha, carbamide ayaa lagu daraa iyadoo loo eegayo qiyaasta taarikhda.
Dhirta Apple waxaa lagula talinayaa in ay siiyaan 200 g oo bacriminta ah geed kasta, iyo jeeriga iyo daloolada oo keliya 140 g.
Waa muhiim! Haddii geeduhu uu yaryahay oo weli wali midho dhalin, markaas qiyaasta HOL waa in la jaraa, haddii haddii loo isticmaalo dabiiciga ah, ugu yaraan hal saddexaad.
Ka shaqaynta foliar
Sida ugu dhakhsaha badan kuwa ugu horeeya ay noqdaan kuwo la dareemo calaamadaha gaajada nitrogen dhirta, hubi inaad haysato daaweynta buufinta foliar dhirta leh xal of HOL iyada oo la isticmaalayo sprayer gacanta fiidkii ama subaxda.
Haddii aysan jirin faleebo, markaa daaweynta waxaa lagu sameyn karaa suuf fudud. Xalka for bacariminta khudaarta waxaa laga sameeyey heerka 60 g of HOL 10 litir oo biyo ah, iyo miraha miro - 30 g oo ah HOL halkii 10 litir oo biyo ah, iyo xal this gubi caleemaha, taas oo aan la sheegi karaa ku saabsan amooniyam nitrate.
Waa muhiim! Haddii uu jiro roobab dibedda ah (tusaale ahaan, roobka), ka dibna ma isticmaali kartid carbamide loogu talagalay dharka caleenta.
Urea ka soo horjeeda cayayaanka beerta
Urea waxay ka heshay isticmaalka beerta iyo beerta sidoo kale sida caawiye fiican ee cayayaanka, iyo haddii aysan jirin rabitaan ah in ay isticmaalaan sunta cayayaanka ee kala duwan, waxay noqon doontaa mid sax ah.
Arrintan awgeed waxaa lagama maarmaan ah in lagu buufiyo dhirta leh xalalka HOL, kelyaha weli lama soo toosin, heerkulka hawada dibedda ahna gaartay + 5 ° S.
Xalka mashiinka sida soo socota: 1 l oo biyo ah - 50-70 g of HOL, iyo xal aad u foogsan (oo loogu talagalay 1 l oo biyo ah - in ka badan 100 g oo ah HOL) ma aha in la sameeyo si aan loo gubin caleemaha.
Habkani wuxuu kaa caawin doonaa si fudud si aad uga takhalusto cayayaanka jiilaalka (weevils, aphid, sucker iyo kuwo kale).
By ku xereen dhirta leh xal isku mid ah sida cayayaanka, aad sidoo kale ka ilaalin karaan qolofka, meelo guduudan, iyo cudurrada kale ee faafa. Xaqiiji dayrtamaalmaha ugu horreeya ee caleen dayrta.